सेयर बजार अर्थमन्त्रीले चाल्ने नया कदमको प्रतिक्षामा – PuraKhabar
सेयर बजार अर्थमन्त्रीले चाल्ने नया कदमको प्रतिक्षामा
March 2, 2018 पुराखबर
काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो साता नै सेयर बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति ४८ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । यससाता परिसूचकमा गिरावट आउँदा सेयर बजारको आकार (बजार पुँजीकरण) ४७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले घटेको हो । अघिल्लो सातको अन्तिम दिन १६ खर्ब २२ अर्ब २ करोड रुपैयाँबाट घटेर १५ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा पुगेको नेप्सेले जनाएको छ ।
यससाता सेयर बजार परिसूचक करिब ४१ अंकले घटेको हो । अघिल्लो साता ३४ अंकले घटेको नेप्से यससाता कारोबार भएको तेस्रो दिनबाहेक अन्य दिन नसुधारिँदा परिसूचक ओरालो लागेको हो । यससाता पहिलो दिन १ हजार ३ सय ८६ दशमलव ९८ को विन्दुबाट सुरु भएको नेप्से अन्तिम दिन १ हजार ३४५ दशमलव ९९ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो ।
लगानीकर्ताले नयाँ सरकार गठनसँगै नेप्से परिसूचक बढ्ने अनुमानमा रहेपनि बजार भने त्यसको विपरितमा अग्रसर छ । लगानीकर्ता भने बाम नेतृत्वको सरकारले पूँजी बजारलाई प्राथमिकता दिने र जसका कारण बजार बढ्ने अनुमानमा थिए । त्यसो त अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा नियुक्त भएको दिन साथ दिएको सेयर बजारले त्यसलाई निरनतरता दिन सकेन ।
यता डा. खतिवडाले सेयर बजारसम्बन्धि अहिलेसम्म केही नबोलेको अवस्थामा लगानीकर्ता यसबाट प्रभावित नभएको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका महासचिव राजन लम्सालले बताए । उनले भने– “बजारमा नयाँ अर्थमन्त्रीले पूँजीबजारमा शुद्धिकरणका लागि उचित कदम चाल्ने हल्ला चलेपनि उहाँबाट कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने हामी प्रतिक्षामा छौं । सायद बजारलाई त्यसैले ड्राइभ गर्ला ।”
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा अर्थमन्त्री भएसँगै परिसूचक बढ्दा राहत पाएका लगानीकर्ता निरुत्साहित बन्न थालेका छन् । देशले स्थिर सरकार पाएको अवस्थामा विकासमा केन्द्रित हुने समय आउने जनअपेक्षा रहेको अवस्थामा सेयरबजार भने सरकारलाई लालसलाम दिन पछि परेको छैन ।
परिसूचक घट्दा यससाता पनि कारोबार रकम बढेको छ । यससाता नेप्सेमा १ अर्ब ९६ करोड ३८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले जनाएको छ । सो क्रममा नेप्सेमा १७४ कम्पनीका ४५ लाख २६ हजार ५५० कित्ता सेयर किनबेच भए । सातभरि कूल १८ हजार ७५ कारोबार भए ।
कारोबार रकम चारै दिन कारोबार भएको अघिल्लो सातभन्दा १५.०४ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो साता बजारमा १७६ कम्पनीका ३२ लाख ४८ हजार कित्ता सेयर १ अर्ब ७० करोड ७० लाख ६८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएका थिए । यस साता पनि ऋणपत्रतर्फ संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रको कुनै पनि कारोबार भएन ।
मंगलबार नेप्से परिसूचक सामान्य बढेपनि बुधबार उच्च रुपमा घटेको थियो । यद्यपि बजारमा बिक्री चाप भने बढेको छ । पछिल्ला दिन बजारमा दैनिक आधा अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुँदै आएको छ ।
बजारमा कारोबार रकम धेरै हुनको अर्थ बजारमा क्रेता र बिक्रेताको उपस्थिति पनि राम्रै रहेको फोरमका महासचिब लम्साल बताउँछन् । उनका अनुसार परिसूचक घट्दा शेयर सस्तोमा पाइने भएकाले माग बढ्छ । “पछिल्लो समय अधिक आपूर्ती र तरलता अभाव तथा ब्याजदरको प्रभाव पनि बजारमा परेको छ,” उनले भने । बैंकहरुले १० प्रतिशतको दरमा निक्षेप माग्दा यसले बजार परिसूचक घटाउन टेवा दिएको हो । उनले थपे– “यी दुवै समस्याको उचित व्यवस्थापन भए मात्र बजारले गति लिनेछ ।”
यद्यपि नेप्से परिसूचकसँगै सेयर मूल्य परिसूचक घटाएर आफूलाई प्रभावित गर्न खोजेको साना लगानीकर्ताको आरोप छ ।
नेप्से परिसूचक बढ्दा यस साता ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि पहिलो दिनको तुलनामा ५ दशमलव २ अङ्कले घटेर २८५ दशमलव ३८ अङ्कमा आइपुगेको छ ।
गतसाता कारोबारमा आएका सबै समूहमा गिरावट आए । तीमध्ये बीमा समूह पहलिो दिनको तुलनामा सबैभन्दा धेरै २७६ दशमलव ३४ अंकले घट्यो । त्यसैगरी लघुवित्त, विकास बैंक र जलविद्युत् समूहमा क्रमशः ५२.७१, ३०.३३ र ५९.२२ अंकको गिरावट आउँदा बैंकिङ, उत्पादनमूलक र होटल समूहमा पनि क्रमशः १८.२७, ४७.४९ र ५४.५४ अंकले ओरालो लागे । त्यस्तै ट्रेडिङ समूह ८.५३ अंक, वित्त समूह १२.५१ र अन्य समूह ७.२२ अंकले घटे ।
यससाता सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीमध्ये शीर्ष ५ का सबै कम्पनी बीमा समूहका रहे । तीमध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अग्रस्थानमा रह्यो । कम्पनीका कूल २२ करोड ६२ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । यस साता काराबार भएको सेयर संख्याको आधारमा प्रभु बैंक ८ लाख १२ हजार कित्तासहित शीर्षस्थानमा रहँदा कारोबार संख्याका आधारमा पनि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स १ हजार ८२६ वटा कारोबारसहित शीर्षस्थानमा रह्यो ।
कारोबार रकमका आधारमा १८ करोड ३५ लाख रुपैयाँसहित प्रभु बैंक दोस्रो स्थानमा रह्यो । सर्वाधिक कारोबार हुने शीर्ष ५ कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक शेयर, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र राष्ट्रिय विमा कम्पनीका संस्थापक सेयर पनि अटाए ।
यस साता नेप्सेमा उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाका ५ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भए ।
जाली फटाहाहरुसँग पैसा लिएर फैसला गर्नेलार्इ महाअभियोग लगाउनुपर्छ
ओलीको घर कब्जा गर्ने विप्लब माओबादीको यस्तो छ तयारी,पक्राउ पूर्जी टाँस्ने भन्दै यस्तो निकाले बिज्ञप्ती